Gbasara Anyị - Qingdao ShiningPlast Ihe Nkà na ụzụ Co., Ltd.
AKW TEKWỌ AKW SHKWỌ AKW SHKWỌ AKW COKWỌ AKW COKWỌ AKW COKWỌ CO., LTD
Pụrụ iche na imepụta nke PP / PE Woven Fabric na Spunbonded PP Nonwoven Fabric.
Site n’inwe ahụmịhe na nghọta dị ukwuu na ụlọ ọrụ ahụ, anyị na-eji usoro kachasị mma kpuchie ihe ịchọrọ.
Afọ 25 na mmepe na eme ka anyị mata ụzọ kacha mma maka gị.
Debe onwe anyị n'ọnọdụ nke ịdị mma dị elu dị iche na ọdịiche dị n'etiti anyị.
Ihe nkwado zuru oke na teknụzụ dị elu na-enye anyị ohere ịmepụta ngwaahịa dịgasị iche iche na njikwa ọnụ ahịa kachasị mma.
Qingdao ShiningPlast Materi Technology Co,. Ltd nwere ngalaba abuo abuo, PP / PE kpara na nonwoven PP Spun-based nke afọ 1995. Anyị hibere na Qingdao China, obodo ọdụ ụgbọ mmiri mara mma.
Anyị bụ ndị nrụpụta ihe na-ebute mbupụ mba dị iche iche na mba niile bụ ndị kachasị ama na -emepụta akwa akwa PP / PE na PP spun-bonding nonwoven. Site na iji uche anyị "goziri ọrụ, ihe ọhụrụ", anyị ji obi ụtọ rụpụta ma na-enweta nnabata n'aka ndị ahịa ụwa n'ụwa niile wee nweta ntụgharị kwa afọ nke nde dollar 42 n'afọ gara aga.
ShiningPlast nwere osisi 2 nke na-ekpuchi ihe dịka 40000 sqm. na ụlọ ọrụ asambodo nke BSCI, OEKO-TEX, ISO 14000 na ISO 9001. Ndị ọrụ anyị 302, gụnyere ìgwè abụọ R&D, amaala ọrụ nke onye ọ bụla. Anyị nwere ahịrị nrụpụta 6 maka akwa a na-abụghị ihe eji arụ ọrụ nwere ihe karịrị puku ton 1300 kwa ọnwa (ma ọ bụ iberibe akpa 30000) yana akwa mmepụta atọ maka PP / PE nke nwere akwa dị 1000 ton kwa ọnwa.
Anyị na-achọkarị ịdị iche na iche. Elydabere na njikwa nka, teknụzụ dị nkọ, ụzụ zuru oke, ọ dịkwa uru nke ngwakọta nke akwa na nonwoven, anyị na-emepụta ụdị ngwaahịa dị iche iche nke sitere na ihe eji arụ ụlọ, papaulin, nkwakọ ngwaahịa, ọrụ ugbo, na ịkpụzi wdg. .
Na mkpokọta, anyị kpuchie ihe ị chọrọ.
Kedu ihe kpatara ShiningPlast bụ nhọrọ kachasị mma gị? Ọbụghị naanị maka na anyị nwere agamiri ọkọnọ zuru oke (ọnụ ala pere mpe) yana ịdị mma dị oke mma, makana anyị maara etu esi enye ọrụ na-enye afọ ojuju. Ikwu maka oru ojuju, obughi ihe nkpa. Anyị na-ekwu maka usoro nchịkwa nke a zụrụ nke ọma nke maara otu esi eme ngwa ngwa maka ihe ndị ahịa chọrọ na ahịa nwere uche ghere oghe. Anyị na-ekwu maka otu ndị ahịa nwere ahụmahụ nke na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ a ruo ọtụtụ afọ ma mara ebe mgbu gị. Anyị na-ekwu maka usoro mmepụta ihe dị iche iche sitere na R&D ruo na nnukwu usoro mmepụta, site na nkwakọ ngwaahịa gaa mbufe, wdg. A ga-ejikọ mkpa a niile iji chepụta atụmatụ azụmahịa kachasị mma maka gị.
MAKA afọ 1995
Anyị ghọtara ihe ịchọrọ, anyị ga-ekpuchi ha.
ShiningPlast, ọ bụghị naanị mmekọ azụmahịa gị.